Miyuu Lionel Messi Haatanba Yahay Xiddig Man City Ah? Dareenka Barcelona Ee Haddii Uu Messi U Wareegayo Sky Blues Oo La Ogaaday - Gool24.Net
Miyuu Lionel Messi Haatanba Yahay Xiddig Man City Ah? Dareenka Barcelona Ee Haddii Uu Messi U Wareegayo Sky Blues Oo La Ogaaday
Kooxda ree Spain ee Barcelona ayaa la sheegayaa inay gabi ahaanba ka samirtay inay sii haysato kabtanka kooxdeeda ee Lionel Messi isla markaana ay qabto dareenka ah inuu Manchester City qaab bilaash ah ugu biiri doono dhammaadka xilli ciyaareedkan.
33 sano jirka ree Argentina ayaa qarka u fuulay inuu iskaga baxo Camp Nou suuqii dhawaa kaddib murano badan oo ka dhashay qaabka ay ragga ugu sarreeya kooxdiisu wax u maamulaan balse ugu dambayn ayaa laga hor istaagay inuu dhaqaajiyo.
Wargeyska England fadhigiisu yahay ee The Mirror ayaa haatan shaaca ka qaaday in waxkasta oo dhacaba ay madaxda sarre ee Barca aaminsan yihiin inuusan Leo baaqi ku ahaanayn kooxda.
Messi ayaa la fahamsan yahay inuu kooxdiisa Barcelona u sheegay inuu doonayo inuu kubadda cagta England dib ugula midoobo macalinkiisii Pep Guardiola.
Tababaraha cusub ee Blaugrana ee Ronald Koeman ayay ku qaadatay kulan inuu la fadhiisto Messi si uu uga dhaadhiciyo inuu ugu yaraan hal xilli ciyaareed oo kale usii ciyaaro kooxdiisa uu tan iyo carruurnimadiisii qaybta ka ahaa.
Madaxweynaha Barcelona ee Josep Maria Bartomeu ayaa diiday inuu aqbalo in Leo qaab bilaash ah kaga tagayo kooxda kaddib qaabkii bahdilaada ahaa ee ay xilli ciyaareedkiisii hore kusoo dhammaysteen.
Qoddob gaar ah oo ku jiray heshiiska Messi ayay xiddiga iyo wakiiladiisu si gaar ah u calaamadsadeen iyagoo u arkayay inuu yahay midka u ogolaanaya inay bilaash ku baxaan.
Si kastaba ha ahaatee, Messi ayaa awoodi doona inuu kooxaha kale ee saxeexiisa doonayo la xaajoon karo bisha January maadaama sharcigu u ogolaanayo.